बहसले पार्टीलाई सुदृढ गर्छ : अध्यक्ष दाहाल « MNTVONLINE.COM
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टी एकतालाई अझै माथिल्लो स्तरमा सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले भने, “आम कार्यकर्ता र जनताको चाहना नेकपा विभाजन नहोस् भन्ने रहेको छ । जन चाहनालाई कदर गर्न एकतालाई उच्चस्तरमा सुदृढ गर्नुपर्छ ।”
तुलसीलाल अमात्यको स्मृति दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले पार्टीमा बहस र विवाद हुनु सामान्य भएको बताए । विचार, मान्यता, विधि र पद्धति कस्तो हुने भन्ने बहस नेकपाभित्र र त्यसलाई प्रतिक्रियावादीले पद प्राप्तिको झिनाझम्टी भन्ने गरेकाले नपत्याउन उनले आग्रह गरे । अध्यक्ष दाहालले भने, “पदका लागि होइन, राष्ट्र र जनताको सेवा नै मुख्य हो । पद हाम्रो विषय होइन । राष्ट्र र जनताको भविष्य सुनिश्चित गर्ने र विकास गर्ने जिम्मेवारीमा हामी छौँ ।”
अहिलेको बहसले पार्टी फुटाउने प्रवृत्तिलाई परास्त गर्ने दाबी गर्दै उनले पार्टीभित्रको बहसलाई छोपछाप गर्न नहुनेमा जोड दिए । अध्यक्ष प्रचण्ड भने, “अहिलेको बहस तिखो भइरहेको छ । हामीभित्रको तिखो बहस चलिरहेको छ, चिल्ला शब्द छैनन् । इतिहासको अनुभवबाट शिक्षा लिएर पार्टी एकता कायम गर्नुको विकल्प छैन । पार्टी फुटाउने प्रवृत्ति परास्त हुन्छ, गरिनेछ । बहसले माथिल्लोस्तरमा लगेर पार्टीलाई सुदृढ गर्छ ।
नेविसंघद्धारा त्रिवि उपकुलपति कार्यालय तोडफोड, ७ जना पक्राउ !
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको विद्यार्थी सँगठन नेपाल विद्यार्थी संघले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको कार्यकक्षमा तोडफोड
सांसद प्रदीप यादव कोरोना संक्रमणमुक्त !
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदिप यादवको दोस्रो कोरोना परिक्षण रिपोर्ट निगेटिभ आएको छ ।
जसपाको विज्ञप्तिप्रति प्रधानमन्त्री सचिवालयको आपत्ति (विज्ञप्तिसहित)
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को निर्णय प्रति प्रधानमन्त्री सतिवालयले आपत्ति जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार
पार्टी अन्तरविरोधमा कसैलाई साथ दिइँदैन : नेकपा सांसद !
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का ६१ जना सांसदले हजारौँ शहीदको सहादत र लाखौँ कार्यकर्ताको